Shazam pawebhu: tsvaga nziyo kubva kubhurawuza | Linux Vakapindwa muropa
Shazam pawebhu: kuzivisa nziyo kubva kubhurawuza kuchakurumidza kuitika
Unofanira kuona kuti zvinhu zviri sei. Muchinyorwa chino ini handisi kuzobvunza iwo mubvunzo wakapusa wekuti Shazam anonzwika akajairika kwauri, kunyanya nekuti ndangozviita masikati ano. Uye ndezvekuti chinguva chakapfuura isu takaburitsa chinyorwa nezve RwiyoRec, chirongwa cheLinux cheShazamear. Ndichangowana kuti Apple yakagadzirisa app yayo yeApple zvishandiso (uye zvakaenzana neiyo macOS) nenhau, asi chinonyanya kufadza ndechekuti vatangisa Shazam pawebhu.
Asi kana paine munhu anonyanya kufarira nezvenhau idzi, zvishingise. Haina kuvhurwa zviri pamutemo, uye unofanirwa kufunga nezvezvinhu zviviri: iri mune beta vhezheni uye iyo bvunzo inogona kuwanikwa chete kubva kuSafari paMacOS kana iPadOS… kana zvakadaro zvazvinofanira kuve. Kubata uko iwe kwaunoona pamusoro pemitsara iyi ndakaita muManjaro, muFirefox, asi ndisati ndaifanirwa kuita shanduko diki. Tevere ini ndinokuudza nhanho dzandakateedzera kuitira kuti iyo nyowani sarudzo ioneke.
Mashandisiro ekushandisa Shazam pawebhu pasina Safari
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kushandura iyo useragent browser. Kune nzira dzakasiyana, asi ini ndashandisa yekuwedzera senge Mushandisi-Agent Switcher uye maneja yeFirefox. Saka danho rekutanga raizove rekuchinja iyo useragent nemaoko kana kuisa iyi yekuwedzera uye sarudza yazvino vhezheni yeSafari uye macOS inoshanda sisitimu.
Kana tangochinja iyo useragent, isu tichaenda shazam.com.
Tinodzvanya pane iyo Shazam icon.
Chekupedzisira, tinokupa mvumo yekuti bhurawuza ishandise iyo micro. Kana tikatarisa bhokisi, nguva inotevera patinodzvanya pane iyo icon, kuzivikanwa kunotanga zvakananga.
Uye ndizvo chete. Izvo zvatinoona pasina kuita hunyengeri ichiripo, asi pasi peiyo nyowani beta interface iyo inotibvumira kuziva nziyo iyo yatinogona kudaidza Shazam pawebhu, kana chete iyo webhu kana webhu vhezheni Shazam.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Shazam pawebhu: kuzivisa nziyo kubva kubhurawuza kuchakurumidza kuitika
Charles Fonseca akadaro
Asingazivikanwe nezita ari kukwiza maoko ake.
Pindura Carlos Fonseca
Cobham uye fentISS vanowedzera hukama hwavo: RISC-V isingamiswe muEurope. Muganhu wacho? Nyeredzi ...
SongRec, unofficial mutengi kuti aite Shazam paLinux